Irezumi, asalka taatuuga ee Japan | Tattoo
Irezumi, asal ahaan tattoos-ka Japan
Ma aha Cherry | | Tattoo Oriental
Dheh in irezumi ay yihiin Tattoo japanese dhaqanku waa yara yaraaday. Ereyga laftiisa macnihiisu waa 'tattoo', sida ire macnaheedu yahay 'gelin' zumi macnaheedu waa khad.
Si kastaba ha ahaatee, muddada irezumi ayaa loo isticmaalay in muddo ah Tattoo-dhaqameedka japaniska. Qodobkaan waxaan ku arki doonaa asalkiisa.
1 Asalka irezumi
2 Farshaxan isbedbeddelaya
Asalka taatuuga ee Japan ma ahan mid aad u cad, in kastoo ay jiraan khubaro ku dhiiraneysa inay dib ugu noqon karto 10.000 BC, Maaddaama calaamado lagu arkay meydadka waqtigaas oo u dhigma kara tattoos, in kasta oo aysan ahayn aragti guud oo la aqbalay.
Waa inaad dib ugu noqotaa 600 BC kahor si aad uhesho muunad ka badan ama ka yar oo la hubo oo ah tattoos-ka Japan. Waxay u muuqataa in qaar ka mid ah martida ka socota Shiinaha ay ogaadeen inta ay ku jiraan safarkooda.
Waxay umuuqataa in xilliyadii hore tattoos loo adeegsaday ujeedooyin ruuxi ah iyo in lagu muujiyo xaalad. Laakiin, xaqiiqda, xitaa marka ay jiraan sheegisyo iyo markhaatiyaal loo yaqaan 'irezumi' wakhtigaas, oo sidoo kale loo yaqaan xilligii Yayoi, waxba looma qaato.
Laba buug oo waawayn oo taariikhi ah wakhtigaas, the Kojiki iyo nihonshokiXaqiiqdii, waxay tilmaameen in tattoos-ka Japan uusan jirin, iyo in kuwii xirnaa ay ajaanib ahaayeen (marka laga reebo Aynu, oo aan dhowaan ka hadalnay).
Taa baddalkeeda, waqtigan amni-darrada ah waxay fureysaa xilli ballaaran oo loo yaqaan 'tattoos' oo kaliya loo isticmaalo in lagu calaamadeeyo dambiilayaasha, sidaas darteedna loo qaato macno aan fiicnayn Ma noqon doonto illaa xilliga Edo (1600-1868), ee irezumi uu gaaro quruxdeeda oo dhan, in arrimuhu bilaabaan inay is beddelaan.
Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay maqaalkan asalka irezumi. Waxaa laga yaabaa in maalin kale aan ka wada hadalno xilligii Edo oo aan ku sii wadno taariikhda xiisaha leh ee farshaxankan. Noo sheeg, ma jeclaan lahayd? Ma haysaa wax qaab ah qaabka Jabaan? Xusuusnow inaad noo sheegi karto waxaad rabto, tan awgeed, waa inaad nooga tagtaa faallo!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoo Oriental » Irezumi, asal ahaan tattoos-ka Japan
Tattoo dayaxa, miyaad garanaysaa macnahooda?
Tattoo joomatari fudud, ururinta naqshadaha